Uche elu - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Ọzụzụ gbasara ọgụgụ isi > Uche Elu
Minds Up bụ mmemme ọzụzụ ụlọ akwụkwọ n'efu nke BLG Mind mepụtara maka ụmụ akwụkwọ sekọndrị. Ihe omume a na-eme ka ndị na-eto eto mara banyere ahụike uche adịghị mma, na-enyere ha aka ịmata ihe ịrịba ama na ime ihe.
Na-eso onye ọkwọ ụgbọ elu na-aga nke ọma nwere ụlọ akwụkwọ mpaghara abụọ, Minds Up dị maka ụlọ akwụkwọ sekọndrị steeti na mpaghara Bromley, Lewisham na Greenwich.
Nnyocha e mere na nso nso a ekpughere ọnụ ọgụgụ na-eto eto na-arị elu na-enwe nsogbu ahụike uche, ụlọ akwụkwọ sekọndrị na-agbakwa mbọ igbo mkpa ha (Mkpụrụ, 2021). A haziri ogbako Minds Up n'efu ka ọ dabara mkpa pụrụ iche nke ụlọ akwụkwọ dị iche iche na otu afọ, na-akwado ahụike uche na ọdịmma ụmụ akwụkwọ.
Ọgbakọ a na-ekpuchi isiokwu dị iche iche, gụnyere:
Ntughari na ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Ihe nlereanya na oke.
Ụzọ isi zere nchekasị ma nọgide na-adị mma nke uche.
A kọwapụtala ọdịnaya nke mmemme ahụ site na nkuzi nwere ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi na ndị ọrụ ọzụzụ atụrụ n'ụlọ akwụkwọ pilot abụọ.
Ebumnuche nke Minds Up bụ:
Hazie ikwu okwu gbasara ahụike uche.
Mepụta oghere ebe ụmụ akwụkwọ na-enwe ahụ iru ala ikwu okwu na ịjụ ajụjụ gbasara ahụike uche.
Welite mmata maka mkpa ọ dị ilekọta ahụike uche na ọdịmma anyị.
Nyere ụmụ akwụkwọ aka ịchọta usoro ọ ga-eji nagide ha.
Kedu ihe na-eme na ụlọ ọrụ Minds Up?
Na mgbakwunye na ịnata ọzụzụ ahụike uche, nwa akwụkwọ ọ bụla na-enweta nkọwa nke ụlọ ọrụ ha nwere ike ịkpọtụrụ ma ọ bụrụ na ha chọrọ enyemaka, yana ndepụta nke ndị ọrụ n'ụlọ akwụkwọ ha nwere ike ịkwado ha.
A na-enye ụmụ akwụkwọ ohere:
a) Nweta nghọta ka mma gbasara ahụike uche wee mara mgbe ihe adịghị mma.
b) Nweta nghọta ka mma maka mkpa ọ dị imere ndị ọzọ ebere.
c) Chọpụtakwuo maka nkwado dị ha.
d) Nweta enyemaka na-enweghị ihere.
Mgbe oge ọzụzụ ahụ gasịrị, anyị na-akọwapụta ndị nkuzi na, ebe ndị na-eto eto rịọrọ ka anyị mee ya, na-eme ntinye aka maka nkwado ọzọ site na ụlọ akwụkwọ ahụ, na-ahụ na nkwado na-esote ruru ụmụ akwụkwọ chọrọ ya.
Ebumnuche nke Minds Up bụ iwulite nghọta zuru oke nke ahụike uche ka ụmụ akwụkwọ wee nwee akụrụngwa na usoro iji kwado onwe ha na ahụike uche ha nke ọma, ọkachasị na-esochi oria ojoo Covid-19.
Ụfọdụ ọnụ ọgụgụ sitere na afọ mbụ nke ọrụ Minds Up:
✔ Ndị na-eto eto 1095 enwetala ọzụzụ.
✔ Pasent 79 nke ụmụ akwụkwọ gara aga kwuru na ha lere ahụike uche ha anya dị ka 'dị mma', 'dị mma' ma ọ bụ 'dị mma'. 14% lere ahụike uche ha dị ka 'ọjọọ' ma ọ bụ 'egwu'.
✔ Mgbe usoro ọzụzụ gasịrị, pasent 70 nke ụmụ akwụkwọ kwuru na ha ga-eji ndụmọdụ na ihe omume ha mụtara na nnọkọ ma ọ bụrụ na ha nwere nchegbu ma ọ bụ mwute.
Kedu ndị ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị maka?
A na-emegharị ụlọ ọrụ a dịka afọ nke ụmụ akwụkwọ si dị, yana ọdịnaya dabara adaba maka afọ dị iche iche maka otu afọ. N'afọ a, ihe karịrị ụmụ akwụkwọ 1000 sitere na afọ 7 ruo 13 sonyere na ọzụzụ ahụike uche nke Minds Up.
Ego ole ka Minds Up na-eri?
N'ihi mbọ ọpụrụiche nke ezinaụlọ abụọ na ndị enyi ha na ndị ọrụ ibe ha na-enweta ego, a na-enye ogbako ndị a n'ụlọ akwụkwọ n'efu.
Kedu otu m ga-esi denye aha ụlọ akwụkwọ m na ọrụ a?
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ọrụ a ma ọ bụ ịbanye n'ụlọ akwụkwọ gị n'efu, biko email workshops@blgmind.org.uk.
Ọnụ, anyị nwere olile anya irute ọtụtụ ndị na-eto eto dị ka o kwere mee, hụ na ha nwetara nkwado kwesịrị ekwesị na n'oge kwesịrị ekwesị.
"Anyị kwesịrị inwe ọtụtụ ọrụ ndị a."
Nwa akwụkwọ afọ 7, Eden Park High
"Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ma anyị na-ekwu banyere nchegbu anyị. O mere ka m chee na anọghị m naanị m.”
Nwa akwụkwọ afọ 7, Newstead Wood
“O mere ka m ghọta na enweghị m obi ụtọ, ma ọ naghị adị m mma ịrịọ onye nkụzi maka enyemaka. Amaghị m otú m ga-esi akọwa ihe ọjọọ.”
Nwa akwụkwọ afọ 8, Eden Park High
"Ọ masịrị m ka m si mata atụmatụ na-adịghị mma nke m ka m wee mara ihe m ga-ezere maka ezi ahụike uche."
Nwa akwụkwọ afọ 9, Newstead Wood
"Ihe mmụta a egosila m mkpa ịdị mma na ahụike uche m dị."
“Nke a bara uru. E kwesịrị ikwukwu isiokwu ndị siri ike.”
Nwa akwụkwọ afọ 11, Newstead Wood
“Ihe omume a adịwo nnọọ ike maka ụmụ akwụkwọ ikwu okwu n’ezoghị ọnụ ihe pụrụ ịbụ isiokwu na-akparị nnọọ. Ụfọdụ na-enwe nsogbu ahụ́ ike nke uche n’onwe ha, ndị ọzọ ekpughewokwa ihe ndị òtù ezinụlọ nọworo na-enwe na mmetụta o mewooro ha. N'ime nnọkọ a, anyị na-ejikọta nke a na atụmatụ maka ilekọta ahụike uche anyị na iwulite nkwụsi ike. Oge ndị a na-enyekwa ohere dị mma maka ikwu okwu gbasara ahụike uche. Ọtụtụ mgbe ụmụaka anaghị ama okwu ‘ezigbo’ ha ga-eji eme ihe, karịsịa n’ime afọ 7 na nke 8, anyị nwekwara ike ịrụkọ ọrụ ọnụ na nke a.”
Onye nkuzi uche
Iji chọtakwuo maka otu mmemme Minds Up nwere ike isi kwado ahụike uche na ọdịmma ụmụaka na ndị ntorobịa nọ n'ụlọ akwụkwọ gị, zitere anyị email site na bọtịnụ dị n'okpuru.
BLG Mind weputara mmemme ahụike uche maka ụmụ akwụkwọ sekọndrị
Uche mba: Ndị na-eto eto nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị n'ofe England gọnarịrị nkwado ahụike uche dị mkpa n'ụlọ akwụkwọ.
Ndị bi na: